Indawo epholileyo kunye neNdawo yaseMaphandleni yeeNdwendwe kumda weDarby
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguBritani
Le yeyona ndawo ifanelekileyo kwaye izolile yokufumana iindwendwe ezonwabele ngaphandle kwaye ungangena ngokulula kwidolophu yaseDarby ngaphantsi kwemizuzu eli-10. Ixhama lingasoloko libonwa libhadula eyadini ngamaxesha amaninzi emini. Iinkwenkwezi zikhazimle ngenxa yokuba akukho zikhanyiso zesixeko ezinokuzirhawula. Kukho indawo yokupaka kunye nezihlangu zekhephu ziyafikeleleka ukuba undwendwe(ii)ndwendwe lwenza isicelo. Iindwendwe zinokufikelela kumabonakude we-Wifi kunye neSatellite kunye neziko elipholileyo lombane.
Eli gumbi lestudiyo lihlala kakuhle nayo nantoni na onokuyidinga ukupheka ukutya okumnandi. Iitawuli ezithambileyo kunye neebhedi zinikezelwe. Ungayonwabela i-55" kamabonakude ngentambo kunye ne-Intanethi elungile kwi-loveseat yakho ehleliyo okanye iTV inokubonwa ngokulula kwitafile yokutyela enokusetyenziswa ngokulula njengendawo yokusebenza.
Ndihlala ndithatha uhambo ngqo ukusuka endlwini ukuya kuhlola indawo ejikelezileyo. Kuzolile kwaye unokuhamba ngokulula ukuya kwiTin Cup kunye nakuzo naziphi na iindlela zomhlaba eziyingqongileyo.
Umbuki zindwendwe ngu- Britani
I bought the home in Darby as a 2nd home but we just love it here so we have stayed here full time. I am new to hosting on Airbnb but I have traveled using Airbnb for many years and I look forward to making my guests feel as welcome as I have while traveling. I am glad to share everything I know about the surrounding area.
I bought the home in Darby as a 2nd home but we just love it here so we have stayed here full time. I am new to hosting on Airbnb but I have traveled using Airbnb for many years an…
Ndicela undithumelele umyalezo xa kukho into oyidingayo